ရေပြန်ဘူးလေး ၊ ရေတိုင်ကီအဖုံးလေး ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ . . ?
အင်ဂျင်အအေးခံစနစ်မှာ ရေပြန်ဘူးလေးနဲ့ ရေတိုင်ကီအဖုံးကလဲ အတော်လေးကို သူ့တို့ကဏ္ဍ အရေးကြီးလှပါတယ်။
သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကတော့ Radiator Cap လို့ ခေါ်တဲ့ ရေတိုင်ကီအဖုံးလေးပါပဲ။ ရေပြန်ဘူးလေးကိုတော့ Reservoir Tank လို့ လိုခေါ်ပါတယ်။
ရေပြန်ဘူးလေးဟာ သူ့မိတ်ဆွေ အဖုံးလေးကနေ အံထုတ်ပေးတဲ့ Coolant တွေကို သူက ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန်သိမ်းထားပေးပြီးတဖန် လိုတဲ့အခါ တိုင်ကီထဲကို ပြန်ပို့ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပါ။ သူ့အကြောင်းထက် သူ့ မိတ်ဆွေ ရေတိုင်ကီအဖုံးလေးအကြောင်းက ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
သူ့မိတ်ဆွေ တိုင်ကီအဖုံးလေးပေါ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီအဖုံးလေးရဲ့ ခံနိုင်တဲ့ ဖိအားကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဆိုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဒ်တူကိုအတိအကျ တပ်ဆင်ဖို့ လိုပါတယ်။
မြန်မာအခေါ်ရေတိုင်ကီလို့ ခေါ်တဲ့ Coolant အရည်ထည့်ရတဲ့ Radiator ထဲမှာရှိတဲ့ Coolant ( အင်ဂျင်အအေးခံအရည် ) ဟာ ကားအင်ဂျင်လည်ပတ်နေတာနဲ့အမျှ အင်ဂျင်အအေးခံလိုင်းတလျောက် ရေလည်အုံ ( ရေပန့်) အကူညီနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားနေတာပါ။
အင်ဂျင်ရဲ့ အပူကိုစုပ်ယူထားတဲ့ Coolant တွေဟာ သတ်မှတ်အပူချိန်ကျော်သွားတာနဲ့ ရေတိုင်ကီထဲကို အအေးခံဖို့ သာမိုစတက်အကူညီနဲ့ ပြန်ရောက်လာပါတယ။် အဲ့ဒီမှာပူနေတဲ့ Coolant တွေဖြစ်တာကြောင့် ဖိအား ဖြစ်လာပါတယ်။
အဲ့ဒီဖိအားဟာ အင်ဂျင်မောင်းနှင်မှုများလာတာနဲ့အမျှ ဖိအား များလာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ radiator ထဲကဖိအားကို လျှော့ချဖို့ အဖုံးလေးက ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါ ဖိအားလျော့သွားပြီး Coolant အချို့ ရေပြန်ဘူးထဲရောက်သွားပါတယ်။ရေတိုင်ကီထဲဖိအားနဲသွားတာနဲ့ တဖန်ရေပြန်ဘူးထဲမှ Coolant ကို ထိုအဖုံးလေးကနေတဆင့်ပြန်ပြီး ရေတိုင်ကီထဲပြန်ရောက်သွားပါတယ်။
ရေပြန်ဘူး ပေါက်နေရင် မပါရင် ရေတိုင်ကီထဲက Coolant တွေ ဆုံးရှုံးပြီး Coolant ပျောက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရေတိုင်ကီအဖုံးမကောင်းတဲ့ အခါ သက်မှတ်ဖိအားမှာ ဘားမပွင့်ပေးတဲ့အတွက် ရေတိုင်ကီ ကွဲတာ ရေလိုင်းတွေပျက်စီးတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အင်ဂျင်တစ်လုံးရဲ့ စွမ်းအားပြည့်ဖို့ အအေးခံစနစ်မှာပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းအားလုံး ကောင်းမွန်နေဖို့ လိုပါတယ်။ တိုင်ကီအဖုံးကို အတိအကျ တော်တဲ့ ဆိုဒ်ကိုသာ တပ်ဆင်ပါ။ ရေပြန်ဘူးထဲမှာCoolant သုံးပုံတစ်ပုံသာထည့်ထားရပါမယ်။ ရေတိုင်ကီထဲမှာ Coolantကို အပြည့် ထည့်ထားပြီးအဖုံးကိုသေချာပိတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။